တရုပ်ပြည် မြောက်ဘက်ဇာတိ ဂိုဘီသဲကန္တရသား မွန်ဂိုများပင်ဖြစ်၏။ « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Uncategorized » တရုပ်ပြည် မြောက်ဘက်ဇာတိ ဂိုဘီသဲကန္တရသား မွန်ဂိုများပင်ဖြစ်၏။
တရုပ်ပြည် မြောက်ဘက်ဇာတိ ဂိုဘီသဲကန္တရသား မွန်ဂိုများပင်ဖြစ်၏။
Khin Mar Swe · 1,957 followers
= = = တောင်အာရှ ဇာတ်တော်ကြီး = = = (၆) KMS 24 MAY 2013
အစ္စလာမ် အစွန်းရောက်တို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်မှာ မူစလင်နိုင်ငံတို့ မူစလင်ဆန်ရေးမျှသာ မကဘဲ မူစလင်အများစု မရှိသည့် နိုင်ငံများသို့ နယ်ချဲ့ရေးလုပ်ငန်းလည်း ပါဝင်ပေသည်။ ဟိုတုန်းကလို စစ်တိုက်၍ ရလျှင် အကုန်လုံး စိစိမွမွကြေအောင် လုပ်ပစ်လို့ရသော်လည်း ခေတ်ပြောင်းသွားသဖြင့် ဥာဏ်ကို လွှာသုံး လာရ၏။ အကြမ်းနည်း ဖောက်ခွဲ၍ ခြိမ်းခြောက်သလို အနုနည်းဖြင့် သံရေးတမန်ရေး ဘာသာရေး နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ဘက်ပေါင်းစုံမှလည်း ထိုးဖောက်နိုင်အောင်ကြံဆောင်ကြ၏။ ထိုသို့ကြံဆောင်ရာတွင် နိုင်ငံအစိုးရ များ အပါအ၀င် မူစလင် အသင်းအပင်းအကုန် ပေးသည့်တာဝန် ကျေကြရ၏။ တာဝန်မကျေလျှင် ကိုယ်တိုင် အန္တရာယ် အပြုခံရမည် ဖြစ်၏။ မူစလင်မဟုတ်သော နိုင်ငံအစိုးရများသည်လည်း အစ္စလာမ်ကို ထိခွင့်မရှိပေ။ အစ္စလာမ်အတွက် အစ္စလာမ်ဥပဒေ ရှိပြီးသားဖြစ်ရာ မည်သည့်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေကိုမျှ ဂရုစိုက်နေရန် မလိုပေ။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့ အင်အားအကြီးဆုံး နိုင်ငံကြီးများ ဖြစ်သော အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ရုရှား အစရှိသည်တို့သည်ပင် မကြာခဏ ဗုံးစာ အကျွေးခံရလေ၏။ ထိုနိုင်ငံကြီးများသည် ဤသို့ ပညာပေးသည်ကို မခံဘဲ အင်အားကြီးများပီပီ ပြန်နှိပ်ကွပ်ပစ်ကြ၏။ ထိုအခါ ၎င်းတို့အား မည်သူတို့က ထောက်ခံပါသနည်း။ အစ္စလာမ် နိုင်ငံအချို့ကပင် ထောက်ခံပါသည်။ အံဖွယ်သုတ။
အင်အားကြီးတို့၏ အနှိပ်ကွပ်ခံရသော မူစလင်တို့သည် အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက် အစတေးခံရသော သူရဲကောင်းများဖြစ်ကာ၊ အင်အားကြီးတို့နှင့် ပူးပေါင်းလိုက်သော မူစလင်တို့သည်ကား ထို အစတေးခံတို့ အတွက် လက်စားပြန်ချေပေးမည့် သူ့လူကိုယ်ဘက်သားများ ဖြစ်၏။ မည်သို့ လက်စားချေပါသနည်း။ အလွန် ကြွယ်ဝသော ပရိယာယ်ဖြင့် အင်အားကြီးတို့အား ချော့ပေါင်းကာ ထိုနိုင်ငံကြီးတို့၌ မူစလင်ဦးရေ တိုးပွား အောင် ကြံဆောင်ကြခြင်းဖြစ်ပေသည်။ အမြှောက်ကြိုက်ဟန်တူသော အင်အားကြီးတို့သည် သဘော ကောင်းကောင်းနှင့် မူစလင်ပေါင်းစုံအား လာနေခွင့်၊ ပညာသင်ခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးလေ၏။ အမှန်အကန် သမားများအထဲ၌ အကြံအဖန်သမားများ ရောထည့်လိုက်ကာ ထိုနိုင်ငံကြီးများ၌ ဖောက်ခွဲရေးနှင့် အဖျက် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြတော့၏။ ထိုအခါ မူစလင်တို့ကို မည်သူတို့က သက်ညှာထောက်ထား၍ အကာ အကွယ်ပေးပါသနည်း။ ထိုနိုင်ငံကြီးသားတို့ကပင် လူ့အခွင့်အရေး၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အစရှိသည်တို့ကို ကြွေးကျော်လျှက် အကာအကွယ်ပေးကြလေသည်။ အံ့ဖွယ်သုတ။
ဤသည်မှာ မူစလင်ဆရာကြီးများအတွက် ခေတ်သစ်အကာအကွယ်ဖြစ်လာကာ အနောက်တိုင်း၌ လူမွေးသော အလုပ်ကို တွင်ကျယ်စွာလုပ်ထားနိုင်လေသည်။ အနောက်တိုင်း၌ မွေးထားသော လူတို့မှာ မူစလင်များမဟုတ်။ လူဖြူ ခရစ်ယာန်များအပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေးသမားများ ဖြစ်၏။ ထိုသူတို့ထံ မူစလင်မဟုတ်သော နိုင်ငံများ၌ မူစလင်လူနည်းစု အဖိနှိပ် အသတ်ဖြတ် ခံနေရပါသည်ဟု လုပ်ကြံသတင်းများ ပေး၏။ ထိုလုပ်ကြံသတင်းများကို ယုတ္တိတန်အောင် ၀ါဒဖြန့်နိုင်ရေးနှင့် အနောက်တိုင်း စံနှုန်းများနှင့် ဘောင်ဝင်စေရေးအတွက် ခေတ်ပညာတတ်များ၊ အနောက်တိုင်းသား သတင်းသမားများကို ငှား၍ ခိုင်းစေ၏။
တစ်ဘက်တွင်ကား လူထု အုံကြွမှု၊ အဓိကရုဏ်း အစရှိသည်တို့ကို ဖန်တီး၍ မူစလင်နိုင်ငံတို့၌ မူစလင် မဟုတ်သူများကို ခြိမ်းခြောက်သတ်ဖြတ်ကြ၏။ ထွက်ပြေးသွားအောင် ခြောက်လှန့်လွှတ်ကြ၏။ ဥစ္စာပစ္စည်း များကို ဖျက်ဆီးလုယက်ကြ၏။ ထိုသို့ပြုသည်ကို မျက်စေ့မှိတ်နေမည့် အစိုးရများ အာဏာရအောင် ခြေပုန်းခုတ်ကြ၏။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့များကို အိတ်ထောင်ထဲ ထည့်ထားကြ၏။ မူစလင်လူနည်းစုရှိရာ နိုင်ငံတို့၌ ထိုလူနည်းစုချည်း စုမိအောင် နယ်မြေတည်ဆောက်၍ ထိုနယ်မြေအတွင်း ထိုးဖောက်ကာ အဖျက်လုပ်ငန်း သင်တန်းပေးခြင်း၊ ထို လူနည်းစုထဲမှ လက်ရွေးစင်များ ခေါ်ထုတ်၍ အဖျက်လုပ်ငန်း သင်တန်းပေးခြင်းတို့ကို ပြုလျှက် အဓိကရုဏ်းများ ရန်စဖန်တီးကာ ၀ါဒဖြန့်ချီရေး ယန္တယားမှတဆင့် ကမ္ဘာသို့ ကြိုတင် ဇာတ်တိုက်ထားသည့် သတင်းများကို ထုတ်လွှင့်ကြတော့၏။ မဟာစင် မုန်တိုင်းတွင် လူ(၅၀)မျှ ဘုတ်မြုပ်၍ သေရာ သေသမျှ အလောင်း ပင်လယ်ထဲ၌ ပေါ်၏။ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခင်း၌ ရိုဟင်ဂျာ ၀ါဒဖြန့်ချီရေးက ဘုတ်အစီးစီးနစ်မြုပ်၍ သေကြကြောင်း၊ ကလေးငယ်များ လှေပေါ်တွင် သေကုန်သဖြင့် ပင်လယ်ထဲ ချပစ်ခဲ့ရ ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရ ရဟတ်ယာဉ်က လှေများကို စက်သေနတ်ဖြင့် လိုက်ပစ်၍ သေကြကြောင်း သတင်းများ လွှင့်သော်လည်း ထိုသို့ အလောင်းတစ်ခုမျှ ပင်လယ်ထဲ၌ မပေါ်ပေ။ မည်သို့ဆိုစေ ကမ္ဘာတွင် ထိုသို့ လှည့်ဖျားခြင်းဖြင့် မူစလင်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထမင်းရှာစားနေကြသော အကြံသမားများကား မနည်းရှိနေလေသည်။
တောင်အာရှဒေသတွင် မူစလင်အရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင် အိန္ဒိယနိုင်ငံကအစ နှာစေးတတ်သည်မှာ အမှန် ဖြစ်သည်။ လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာစုံ လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်၍ တတ်နိုင်သမျှ အကျယ်အကျယ် မဖြစ်စေလိုသည်က တစ်ကြောင်း ဖြစ်ဟန်တူ၏။ အာဏာရအစိုးရတို့ အသုံးမကျဟု လည်းကောင်း၊ ရဲအဖွဲ့ အသုံးမကျဟု လည်းကောင်း မမြင်စေလိုသည်ကလည်း တစ်ကြောင်း ဖြစ်ဟန်တူသည်။ မူစလင်ခိုးဝင်မှုကို အကြောင်းပြု၍ ၀င်ငွေလမ်းဖြောင့်သူများ၊ မဲဝယ်လိုသော နိုင်ငံရေးသမားများ ရှိနေခြင်းကလည်း တစ်ကြောင်း ဖြစ်ဟန်တူသည်။ လွတ်လပ်ရေးကို အတူတိုက်ယူခဲ့ကြပြီး ယခုတိုင် ရောနှောနေထိုင်ကြသော မူစလင် သန်း (၀၀၀)၏ မျက်နှာကို ထောက်ရသည်ကလည်း တစ်ကြောင်း ဖြစ်ဟန်တူ၏။ အတိတ်ကပင် တောင်အာရှဇာတ်တော်ကြီးတွင် မူစလင်တို့၏ ကကွက်ကြမ်းကြမ်းများနှင့် တရင်းတနှီး ဖြစ်နေသည်ကလည်း တစ်ကြောင်းဖြစ်ဟန်တူ၏။
ရှေးဟောင်းပါးရှားပြည်၍ အခြေခိုင်သော အစ္စလာမ်သည် တောင်အာရှသို့ တော်တော်နှင့် အခြေချနိုင်သည် မဟုတ်ပေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာ ထွန်းကားသော အာဖဂန်သို့ အေဒီ(၇)ရာစု၌ ချည်းနင်း ရောက်ရှိခဲ့ သော်လည်း ဒေသခံတို့က လက်မခံခဲ့ပေ။ အေဒီ(၁၀)ရာစုတွင် တစ်ကြိမ်ထပ်မံ ၀င်ရောက်လာပြီး (၁၀၃၀)ခုနှစ် ခန့်တွင် အာဖဂန်တစ်နိုင်ငံ တ၀ှမ်းလုံးသို့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ပြန့်နှံ့စေခဲ့သည်။ ပါကစ္စတန်သို့ အေဒီ (၇၁၁)တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာ စတင်ရောက်ရှိပြီး အေဒီ (၁၂)ရာစုတွင်မှ ယခုခေတ် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဖြစ်နေသော ဒေသကို အပြီး သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယသို့ကား အေဒီ (၁၀)ရာစုအကုန်လောက်တွင် စတင် ၀င်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ တောင်အာရှသို့ အစ္စလာမ်ကို သွင်းလာခဲ့သည်မှာ ပါးရှားတို့မဟုတ်ဘဲ တူရကီများ ဖြစ်၏။ တဖန် (၁၁၇၅)ခုနှစ်တွင် အာဖဂန်မှ မူစလင်တပ်ကြီးသည် အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်လာပြီး အနှစ် (၂၀)မျှ ကာလကြာအောင် တိုက်ဖျက်ကြရာ ရာမ၊ လက္ခဏ၊ သီတာတို့၏ ဟိန္ဒူစတန် လွင်ပြင်ကြီး တစ်ခုလုံးမှာ မူစလင်လက်အောက်သို့ ကျရောက်သွားလေသည်။ ထို စစ်ဘုရင်ကြီး၏ အမည်မှာ ဂေါလ်ဘုရင်မိုဟာမက် ဟူ၍ဖြစ်ရာ ဘင်္ဂေါနယ်အစပ်ရှိ ဂေါလ်ပြည်အထိသိမ်းယူနိုင်သဖြင့် ထိုဘွဲ့ကို ခံယူရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိသာပေသည်။ အင်္ဂလိပ်အသံဖြင့် ဂေါလ်ဟုခေါ်သော ဂေါဒပြည်မှာ ရှေးဟောင်း တိုင်းပြည်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မူလက ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာတို့ ထွန်းကားရာ ပြည်ဖြစ်သည်။ ဂေါဒပြည်ကို ဘင်္ဂေါဒေသဟု အနောက်တိုင်းသားတို့က ခေါ်သော်လည်း အမှန်မှာ ဘင်္ဂေါပြည် အပြင်ပသာ ဖြစ်သည်။
တောင်အာရှ ဇာတ်တော်ကြီး ခင်းကျင်းရာ မြေအပြင်၌ ယခုအခါ အဓိက အပိုင်းကြီး ငါးးပိုင်း ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ၏။ အနောက်မြောက်ပိုင်း တောင်အာရှဒေသနှင့် မြောက်ပိုင်းရှိ ဟိန္ဒူစတန်ဒေသကြီးမှာ မူစလင်လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ရာနယ်ပယ်များဖြစ်လာပြီး အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဒေသများမှာ ဟိန္ဒူဘာသာထွန်းကားလျှက် ရှိနေသော နယ်ပယ်များအဖြစ် ကျန်ရှိသည်။ သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ မဆွကပင် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားလေရာ ဟိန္ဒူကော၊ မူစလင်ပါ မလွှမ်းမိုးနိုင်သော အရပ်အဖြစ် ကျန်ရှိနေသည်။ ဂေါလ်ပြည် အပြင်ဘက်၌ ကျန်ရစ်နေသော လက်ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတည်ရှိရာ ဘင်္ဂေါဒေသကြီးမှာ မဟာမုနိ ရုပ်ပွားတော်ကြီး တည်ရှိခြင်းကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗဟိုဌာနအဖြစ် ကျော်ကြားသော ရခိုင်ပြည်နှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်အဖြစ် ကျန်ရှိနေသည်။ အာသံ၊ ဘူတန်၊ နီပေါလ် အစရှိသော ဟိမ္မ၀ိန္တာ တောင်ခြေရှိ ဒေသများမှာကား မူစလင်တို့ ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် ရိုးရာကိုးကွယ်မှုတို့ ထွန်းကားလျှက် ရှိနေသည်။
တောင်အာရှ ဇာတ်တော်ကြီး၌ နောင် ထပ်မံဝင်ရောက်အသုံးတော်ခံလာမည့် ဇာတ်လိုက်မှာကား တရုပ်ပြည် မြောက်ဘက်ဇာတိ ဂိုဘီသဲကန္တရသား မွန်ဂိုများပင်ဖြစ်၏။
By Burma Democratic Concern (BDC) in Uncategorized on 24/05/2013 .
← Face Book Knowledge, Information and News	President Obama Speaks on the U.S. Counterterrorism Strategy. →
ညီလာခံတက်ရန် လာသော အဖွဲ့ချုပ်ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များကို ကြိုဆိုပါသည် ။ ဆက်သွယ်လိုပါလျင် - ၀၉ ၂၅၄၂ ၇၈၇၉၀ မိတ်ဆွေများ အားလုံး welcome ပါ ။3days ago